DEG-DEG: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ula Wareegtay Xiddigii Belgium Ee Xogtiisa Aanu Hore Idiin Siinay - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ula Wareegtay Xiddigii Belgium Ee Xogtiisa Aanu Hore Idiin Siinay
DEG-DEG: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ula Wareegtay Xiddigii Belgium Ee Xogtiisa Aanu Hore Idiin Siinay
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si rasmi ah u dhamaystirtay saxeexa xiddiga reer Belgium ee Albert Sambi Lokonga oo ay kala soo wareegtay kooxda Anderletch.
21 jirkan ayay Arsenal la gaadhay heshiis waqti dheer ah iyadoo kasoo kaxaysatay kooxda uu tababaraha ka yahay Vincent Kombany ee Anderletch oo uu ka ahaa tiir muhiim ah oo kaliya 78 ciyaarood uu u saftay.
Laacibkan oo warbaahinta la hadlay ayaa farxad kusoo dhoweeyey inuu ku biiray Arsenal oo uu qalinka ugu duugay qandaraas shan sannadood ah, waxaanu yidhi: “Tani waa tallaabo weyn sababtoo ah waxa aan muddo 10 sannadood ah u ciyaarayay Anderlecht, markaa tani waxay noqon doontaa dhaqaaqaygii u weynaa ee aan ku talo waddan kale.
“Waa tallaabo weyn laakiin waxa aan dareemayaa kalsooni sababtoo waa in aanu kalsooni muujino. Dunida kubadda cagta, waa in aad naftaada kalsooni ku qabto, balse waxa aan rajaynayaa in aan ka ciyaaro horyaalkan [Premier League], mana sugi karayo inta uu bilaabmayo.”
Mar la weydiiyey in uu jecel yahay inuu ka ciyaaro dhexda iyo inuu weerarka raacsanaado oo uu afka hore ku dhowaado, waxa uu ku jawaabay: “Labadaba waan ka ciyaari karaa.
“Waxa aan ka ciyaari karaa lambar lix ama waxa aan noqon karaa mid gool illaa goolka kale ah, waxa aanse ku fiicanahay booska lambar lix.”